Finland waxey ku kaalmeysaa adduunyada - Asylum in Finland
Beesha caalamka oo dhan waa in ay isku dayaan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen in la damaanad-qaado duruufaha nololeed iyo xuquuqda dadka si uusan qofna ugu baahan haddii uusan dooneyn in uu ka qaxo wadankiisa. Isku-daygan wadajirka ah ayeey Finland qeyb firfircoon ka tahay.
Haba ugu badnaadaan rabshadaha daba-dheeraaday ee Siiriya, Ciraaq, Afgaanistaan iyo xasaradaha Bariga iyo Galbeedka Afrikee, dad badan ayeey qasab ku noqotay in ay ka tagaan guryohood kana raadsadaan megagelyo meel kale, inta badan Yurub. Sababuhu waxey noqon karaan xittaa kuwo siyaasadeed, raadinta nolol dhaqaale oo wanaagsan ama tusaale ahaan xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka.
Finland waxey ka qeybqaadaneysaa xal u helidda dhibaatooyinka ka dambeeya dhaqdhaqaaqa geeddiga ama hayaanka iyadoo qeyb ka ah beesha caalamka iyo Midowga Yurub. Waxaa jira habab kale oo ay Finland iskula dayeeyso in ay saameyn ku yeelato sidii qofna aysan qasab ugu noqon in uu gurigiisa ka tago isagoo aan raali ka aheyn.
Hababkan waxaa ka mid ah:
· kaalmo bani’aadminimo
· dhexdhexaadin nabadeed
· maareynta xasaradda
· iskaashi horumarineed
· xuquuqul insaanka
· siyaasad ganacsi
· kahortagga isbedelka cimilada iyo
· xiriirada iskaashiga ee labo-dal u dhexeeya iyo iskaashiga caalami ah.